3 qalab si aad u ogaatid qalabka nidaamkaaga | Laga soo bilaabo Linux
Ya waxaan aragnay dhowr jeer sida loo helo macluumaadka ku saabsan hardware adeegsiga, gaar ahaan laga soo qaado boosteejada. Maanta waxaan soo bandhigeynaa 3 qalab garaaf ah kuwaas oo ah beddel siman oo ansax u ah dadka cusub ama kuwa doorbida raaxada UI.
2 macluumaad adag
Waa istiraatiijiyadda garaafka ee lshw, aalad xariiq amar ah oo aan haddaba si faahfaahsan ugu soo koobnay maqaal kale loo isticmaalay in lagu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan qalabka la isticmaalo.
En Debian / Ubuntu iyo waxyaabaha laga helo:
sudo apt-hel rakib lshw-gtk
En Fedora iyo waxyaabaha laga helo:
sudo yum ku rakib lshw-gui
Dhamaan distros-yada oo dhan, kaliya socodso lshw-gtk si aad u bilowdo barnaamijka. Fedora, amarka adeegsiga waa lshw-gui.
HardInfo waxay muujineysaa faahfaahinta qalabka la isticmaalay laakiin, si ka duwan lshw, waxay sidoo kale muujineysaa xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan nidaamka qalliinka: xallinta shaashadda iyo macluumaadka kale ee la xiriira, nooca kernel, magaca kumbuyuutarka iyo isticmaaleha hadda, jawiga desktop, Runtime, modul kernel firfircoon, luqadaha la heli karo, macluumaadka nidaamka faylka, iwm.
Marka ay timaado macluumaadka qalabka, wuu ka faahfaahsan yahay lshw laakiin waa mid aad u macquul ah iyada oo ay ugu wacan tahay isku xirnaanta saaxiibtinimada.
Sidoo kale, Hardinfo waxay u oggolaaneysaa socodsiinta tijaabooyin waxqabadyo kala duwan (tilmaamo):
Processor: Blowfish, CryptoHash, Fibonacci, N-Queens
FPU: FFT iyo Raytracing
Sida lshw, dhammaan macluumaadka waxaa loo dhoofin karaa feyl-keliya (TXT) feyl ama bogga HTML. Si kastaba ha noqotee, waa in la xoojiyaa in natiijada kama dambaysta ahi ay aad uga fiican tahay lshw maaddaama macluumaadku ka cad yahay, waa ka fiican yahay kooxaysan, iwm.
sudo apt-get rakib Hardinfo
sudo yum rakibi Hardinfo
Sysinfo waa aalad ka wax yar ka horumarsan tahay Nidaamka Kormeerka ee ku yimaada sida caadiga ah dhammaan qeybinnada, markaa ha filan wax badan. Si kastaba ha noqotee, waa beddel fudud iyo mid yar marka ay timaado helitaanka macluumaad yar oo dhammaystiran oo nidaamka ah.
sudo apt-get rakib sysinfo
Si aad u aragto liis dhammaystiran oo amarro iyo beddelaad ah si aad u ogaato qalabka nidaamkaaga, waad akhrisan kartaa maqaalkan hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » 3 qalab si aad u ogaatid qalabka nidaamkaaga
Macluumaad wanaagsan laakiin kaliya qoraal ah waxaanan rajaynayaa inaadan u qaadaynin qaab khaldan, halkii aad ka raaci lahayd ubuntu iyo wax soosaarayaashu waa inay noqdaan Debian iyo wax soo saar, waxaanan idhi waad ku mahadsan tahay macluumaadka
Aad baan ula yaabay inaadan ku arkin KInfoCenter halkan
Aad u faa'iido badan oo xiiso leh.
Ku jawaab metalus
Mahadsanid aad u fiican!
Oo weliba waxaan ka ogaan karaa faahfaahinta ku saabsan xusuusta RAM ee pc-ga?
Gabriel Llorens sawirka meel dijo
Haye, sidee ayaan ugu isticmaali karaa Hardinfo-ka xariiqda taliska si aan ugu socodsiin jaangooyooyinka? Aad baad u mahadsantahay !!
Jawab Gabriel Llorens
Soo bandhigida jeesjeeska loogu talagalay naqshadeynta barta cusub
Kala duwanaansho: aalad si toos ah loogu beddelo sawir-qaadaha